Raspberry Pi 3: ကုန်ကျသော Credit Card ကို-size 1.2GHz ကို PC $35 - သတင်း Rule
Raspberry Pi 3: ကုန်ကျသော Credit Card ကို-size 1.2GHz ကို PC $35
က 8 မီလီယံထုတ်ကုန်လေးနှစ်တွင်ရောင်းချခဲ့ကြကြေညာအဖြစ် Raspberry Pi အခြေခံအုတ်မြစ်အသစ်မော်ဒယ်မိတ်ဆက်, ဒါကြောင့်ဗြိတိန်၏ All-အချိန်အရောင်းကွန်ပျူတာအောင်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Raspberry Pi 3: $ 35 ပဲကုန်ကျကြောင်းခရက်ဒစ်ကဒ်အရွယ်အစား 1.2GHz ကို PC” အဲလက်စ် Hern ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com တနင်္လာနေ့ 29 ဖေဖေါ်ဝါရီလအပေါ်များအတွက် 2016 12.19 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ဒါကြောင့်ရောင်းအား 8 မီလီယံထိပ်ဆုံးကြပါပြီကြေညာခဲ့သည်အဖြစ် Raspberry Pi အခြေခံအုတ်မြစ်ဟာသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်အရွယ်ကွန်ပျူတာ၏နောက်ဆုံးမျိုးဆက်တွေစတင်ပေးခဲ့ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဗြိတိန်၏ All-အချိန်အရောင်းကွန်ပျူတာအောင်.
အဆိုပါ Raspberry Pi 3, တနင်္လာနေ့ကဖြန့်ချိ, ကုန်ကျစရိတ်များ $35 (£ 25), ၎င်း၏ယခင်ကဲ့သို့တူညီသော (ultra-stripped-down ထက်နေဆဲခုနစ်ကြိမ်ထက်ပိုပေမယ့် Raspberry Pi ကိုသုည, သောခဲ့သည် မဂ္ဂဇင်းနှင့်အတူတစ်အခမဲ့အဖုံးဆုလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြန့်ချိ). ၎င်း၏အသေးစားပုံစံကိုအချက်တစ် 1.2GHz Quad-core ARM processor ကိုဖြစ်ပါတယ် (အ Pi ကို2ရဲ့ 900MHz ကနေတိုးတက်မှု), အဖြစ်ကို Wi-Fi နှင့်ဘလူးတုသ်ပေါင်းစည်း, စီးရီးတစ်ခုပထမဦးဆုံး.
အဆိုပါ Pi ကိုမိသားစုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတစ်ဦးအားကြီးသောပရိတ်သတ်အခြေစိုက်ရှိပါတယ်. ၎င်း၏အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်, ပါးလွှာပုံစံနှငျ့အနိမ့်ပါဝါစားသုံးမှုဝါသနာရှင်ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးကြောင့်အသုံးဝင်သောလုပ်, ရိုးရှင်းမီဒီယာစင်တာဖန်တီးခြင်းနေ Bootstrap router သို့မဟုတ်တစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံထား retro ဂိမ်းစက်မှ.
အဆိုပါစက်လည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ပညာရေးအစပျိုးနှင့်အတူဖော်ထုတ်ဖြစ်လာသည်, ရှေ့မှာ BBC ကိုမိုက်ခရိုနဲ့တူ, Code ကိုကလပ်နဲ့တူအုပ်စုများ၏အကူအညီကိုကျေးဇူးတင်, စာသင်ကျောင်းများအတွက် programming သင်ပေးဖို့ Raspberry Pi စက်တွေကိုသုံးရာ. နိုဝင်ဘာလထဲမှာ 2015, ထို Raspberry Pi အခြေခံအုတ်မြစ် ဝယ်ယူ Code ကိုကလပ်, "UK ရှိတိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် Code ကိုကလပ်ချပြီး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနဲ့, နောက်ဆုံးမှာ, "ဤလောကကိုဖြတ်ပြီး.
အဆိုပါ Raspberry Pi3ဖြစ် ဝယ်ယူယနေ့အဘို့အရရှိနိုင်, ဘို့ $35.
အကောင်းဆုံးစာဖတ်သူကို Raspberry Pi စီမံကိန်းများ - နှငျ့အမြားဆုံးအဓိပ္ပာယ်မဲ့အခြို့
23596	6 အဲလက်စ် Hern, အပိုဒ်, computing, အားကစားပြိုင်ပွဲ, သတင်း, Raspberry Pi, နည်းပညာ
← အကောင်းဆုံးအာကာသ Selfies [RANKER] အဆိုပါ Next ကိုမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ Humanoid စက်ရုပ်တွေ့ဆုံရန် [VIDEO] →